The Ajụjụ ị chọrọ ka ị jụọ na nyocha ọzọ gị | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 9, 2006 Saturday, May 2, 2015 Douglas Karr
Ezigbo enyi m Chris Baggott nwere ọmarịcha ihe post taa gbasara nyocha. Enwere m nkwekọrịta zuru oke na Chris. Biko ajụla m ndụmọdụ m ma ọ bụrụ na ị gaghị eme ihe ọ bụla na ozi ahụ. Onye ọ bụla maara m na-aghọta na m hụrụ n'anya na-enye echiche m… mgbe ụfọdụ ka mmejọ. Ndị enyi m maara na ha nwere ike ịtụkwasị m obi.
Enwere di na nwunye ihe kpatara nke a:
Abụ m onye nwere mmụọ na-eto eto na-eto eto. Achọpụtara m na elekere na-akụ, n'ihi gịnị, ị ga-akụ gburugburu ohia!
Ọ bụrụ na m na-ekwu ihe m na-ekwu mgbe niile na ihe m na-ekwu, ndị folks ga-enweta otu akụkọ ahụ mgbe niile. Ha ma na anaghị m agwa ha ihe ọ bụla ka ha nụrụ ihe ha chọrọ.
Ma… ọ bụrụ na ị nọgide na-arịọ maka ndụmọdụ m, gwa m na ị hụrụ ya n'anya, wee na-eleghara ya anya… mgbe ahụ, agaghị m etinye oge m ịnọnyere gị n'ọdịnihu. Nke a apụtaghị na ị gaghị ekwenye, m na-ezighi ezi. Naanị ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na mkpali gị bụ bs ka m nwee mmetụta dịka enwere m obi ụtọ, achọghị m igbu oge m na gị. Ma agaghị m.
Nyocha dị nnọọ ka nke a. Amaghị m ụlọ ọrụ ọ bụla na-amaghị ihe mgbu maka onye ahịa. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ndị ghọtara ihe mgbu niile nke ndị ahịa ha, ihe ndị mmadụ na-atọ ụtọ, na ihe ndị mmadụ enweghị ike iguzo. Ihe bụ nsogbu bụ na anyị anaghị echegbu onwe anyị ige ntị ruo mgbe anyị jikere. Nke ahụ bụ n'ezie ihe nnyocha e mere bụ - ọ na-agwa onye ahịa gị, "Ọ dị mma, Adị m njikere ịge gị ntị ... biko gwa m ihe masịrị gị na nke na-adịghị amasị m."
Nyocha ga-elekwasị anya na njedebe nke ọnụ ọgụgụ. N’akụkụ ziri ezi, ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ nke nwere ike ịkpata nzaghachi a tụrụ atụ dị mma. Rịọ m ka m were dị ka nsọpụrụ nke ọgbakọ omebe iwu bụ ihe nzuzu. Onye ọ bụla maara ma onye nchekwa gị ọ dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị. Kingjụ m ụdị uwe m ga-eyi ka m wee nwee ike soro ma wetara gị otu dị mma. Kingrịọ m ma ọ masịrị A vs. B dị oke mma… ọkachasị mgbe ị kpọrọ onye m họọrọ.
N'akụkụ nke ọzọ nke ọnụ ọgụgụ dịkwa mkpa. Enyi ọzọ, Pat Coyle, kọọrọ m akụkọ otu oge ebe ụlọ ọrụ nwere naanị ajụjụ na nyocha ha…
Nwere ike ịkwado anyị na enyi?
Nke bụ eziokwu bụ na otu onye na ụlọ ọrụ gị maara ihe ga - eme ka ọ ka mma. Ha nwere ike ịtụ ụjọ ikwu ya. Ma ọ bụ na ha nwere ike ha enweghị azụta iji dozie ya. Ma ọ bụ, ọtụtụ mgbe, ha maara na ọ gaghị edozi ya ya mere gịnị kpatara nsogbu. Ọ bụrụ n’ịgaghị ege ndị ọrụ gị ntị, ohere nwere ike ịbụ na ịgaghị ege ndị ahịa gị ntị.
Nnyocha ndị e mere bụkwa fodder iji 'kwado' nkwenkwe gị. Gwa onye njikwa ihe 10 kachasị mkpa ka ha dozie dabere na nyocha gị na mgbe ụfọdụ, a na-eleghara gị anya dị ka onye isi. MA… na-enye narị narị ole na ole site na ndị ahịa gị na-akwado ihe 10 kachasị elu, na mberede ndị mmadụ na-ege ntị. Nke ahụ ọ bụghị mwute? Eche m!
Anaghị m atụ aro ka gị na ndị ahịa gị kwụsị ikwurịta okwu. Dị nnọọ iche, m na-ekwu gbasasịa na nkwukọrịta nke gị na ndị ahịa. Nyocha nyocha abụghị nkwukọrịta. Ọ dịkarịghị ụzọ abụọ. Ya mere kwụsị ime ya. Mee ka ndị ọrụ gị gwa gị ihe ndị ahịa na-ekwu wee mezie ya.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata ihe ndị ahịa gị na-eche gbasara gị, otu ajụjụ dị mfe zuru oke:
Tags: nyocha ndị ahịaotu nnyocha e merennyocha e mereajụjụ nyocha
4 Sekọnd ma ọ bụ Na Na
Jun 7, 2016 na 3:34 AM